Guri la'aanta oo horseedda in lala xiriiro xafiisyada ceeydha - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Guri la'aanta oo horseedda in lala xiriiro xafiisyada ceeydha
La cusbooneeyay onsdag 13 mars 2013 kl 09.26
La daabacay onsdag 13 mars 2013 kl 08.24
Xaaladda guri-la'aanta ayaa iminka laga dareemeyaa hoowlaha xafiisyada ceeymiska bulshada ee degmooyinka dalka. Xaqiiqdii waxaa qoorta u suran hoowl-wadeennada xafiisyada taageerada bulshada waxa soomaalidu u taqaan ceeydha dadyoow aan caadiyan u baahneyn taageerada xafiisyadaa, maadaama aaney u muuqan dhabbo kale oo ey ku heli karaan hooy .
– Kooxda ugu badan ee qolyahaa ayaan ka mid aheyn kooxaha u baahda taageerada hoowl-wadeennada ee hayadda taageerada bulshada ee loo yaqaanno ceeydha, maadaama aaney jirin caqabad dhanka nolosha kala soo gudboonaatey oo ey ugu baahdaan. Midda keliya ee ku khasabtaana tahay baahida ey u qabaan hooyga, sida uu sheegay Kenneth Edström, ahna isku-duwaha dhanka hooyga ee degmada Norrköping.
Sarkaalkan ayay soo gaaraan telefoonno ey u soo diraan dadyoow ey caqabad ballaarani kala soo gudboonaatey hooy la’aanta, haddey nahaan laheyd dhallin-yada, dadyoow guur ku kala tagay, hase yeeshee aan horaey uga diiwaan-gashaneyn liiska guryaha ama aan xilligoodii la gaarin, dadyoow ka baxay diiwaanka ceeymiska ee sanduuqa shaqa-la’aanta a-kassa oo aan awood u laheyn iney sii deggenaadaan fiilooyinkooda iyo sidoo kale dadyoow lagu yeeshey deymo aan badneyn.
Dadyoowgaa ayaa noloshooda kifaaleeyn kari lahaa, isla-markaana aanan u baahnaan laheyn taageero ey ka helaan laamaha taageerada bulshada ee degmooyinka.